Durango: တောရိုင်းမြေ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Durango: တောရိုင်းမြေ
Durango: တောရိုင်း APK ကိုနိုင်
Durango ဂိမ်းဝေဖန်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင် E3 ရဲ့ "အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း / Handheld" အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ဒိုင်နိုဆော MMO ဂိမ်းပါ!
1) အကြံပြုအထူးအသေးစိတ်: Android ကို OS ကို6သို့မဟုတ်မြင့်မားသော / က Galaxy S7 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
2) အနည်းဆုံးအထူးအသေးစိတ်: Android ကို OS ကို 4.4 သို့မဟုတ်မြင့်မားသော / က Galaxy S5 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မား
သငျသညျပြဿနာများရှိခြင်းပါသလား? In-ဂိမ်း 1 ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 ကိုဆက်သွယ်ပါ
[စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုချက်များ] - Optional ခွင့်ပြုချက်ဂိမ်းမထိခိုက်ပါဘူး။
[မည်သို့ခွင့်ပြုချက်များငွေထုတ်ရန်]> Android ကို 6.0 နှင့်အထက်: Setting> Apps ကပ> Accept / ပြန်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုချက်> ခွင့်ပြုချက်များ> ခွင့်ပြုချက်စာရင်းကို Select လုပ်ပါ
> Android ကို 6.0 အောက်တွင်: ခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းဖို့ operating system ကို Upgrade, ဒါမှမဟုတ် app ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။
93.48 ကို MB